गुल्मीको इश्मा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी - स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
गुल्मीको इश्मा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी
गुल्मी — गुल्मीको इश्मा गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका भगत सिंह खड्का र उपाध्यक्षमा पार्वती कुँवर विजयी भएका हुन् । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार खड्काले नेकपा एमालेका हिराबहादुर अर्याललाई १ सय २५ मतले पछि पारेर र उपाध्यक्षमा कुँवर ७ सय ८८ मतान्तरले विजयी भएका हुन् ।
खड्काले ५ हजार ५ सय ८९ मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका हिराबहादुर अर्यालले ५ हजार ४ सय ६४ मत ल्याए । त्यस्तै उपाध्यक्ष पदमा कुँवर ५ हजार ९ सय ९ मतका साथ विजयी हुँदा एमालेका तर्फबाट विमला खत्रीले ५ हजार १ सय २१ मत ल्याएकी छन् ।
इश्माको ६ वडा मध्ये ४ वटा वडामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ भने २ वटा वडा नेकपा एमालेले जितेको छ । नेपाली कांग्रेसका वडा नं १ मा शेर बहादुर कुँवर, २ मा लोकनाथ आचार्य, ५ मा झविन्द्र अर्याल र वडा नम्बर ६ मा ढालबहादुर कुँवर विजयी भएका छन् । त्यसैगरी नेकपा एमालेको तर्फबाट इश्मा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा ज्योतिराज कुँवर र वडा नम्बर ४ मा राजु बस्नेत वडाअध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ १७:३१
मदाने गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेदवार १० मतले विजयी, उपाध्यक्षमा एमाले
गुल्मी — गुल्मीको मदाने गाउँपालिका अध्यक्षमा झिनो मतान्तरले नेपाली कांग्रेसका महेन्द्रबहादुर कुँवर विजयी भएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेदवार कुँवरले एमालेका प्रेम केसीलाई जम्मा १० मतले पराजित गर्दै अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।
अध्यक्षमा विजयी कुँवरले ४ हजार ७ सय ७ मत ल्याउँदा गर्दा केसीले ४ हजार ६ सय ९७ मत ल्याए ।
पालिकाको उपाध्यक्ष पदमा भने एमालेबाट सरिता खड्का ३ सय ५६ मत अन्तरले विजयी भएकी छन् । खड्काले ४ हजार ५ सय ६५ मत ल्याउँदा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका नेकपा (माओवादी) केन्द्रका वेगमबहादुर चन्दले ४ हजार २ सय ११ मत मात्र प्राप्त गरे ।
उपाध्यक्षमा गठबन्धनका धेरै मत बदर हुँदा उपाध्यक्ष पद गुमेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । गठबन्धनको उम्मेदवारहरुलाई क्रस मत धेरै बदर भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा एउटा वडाध्यक्षबाहेक सबै जितेको एमालेले अहिले उपाध्यक्ष, २ वडाध्यक्ष र ३ जना वडासदस्य जितेको छ ।
वडाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडा नं. १ मा सुशील चन्द, ३ मा चेतबहादुर सेन, ४ मा प्रेमबहादुर सेन, ६ मा मनिराम थापा र ७ मा सन्तोष केसीले जितेका छन् ।
त्यस्तै एमालेको तर्फबाट वडा नं. २ मा हिमाल केसी र ५ मा माधव भुसाल विजयी भएका छन् । एमालेका तर्फबाट विजयी वडाध्यक्ष दुवैजना यसअघि पनि वडाध्यक्ष थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ १५:४३